Ngaba Ixesha Esifa Ngalo Libekwe Kwangaphambili? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAbkhaz IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdau IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSomali IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Akunjalo. Ixesha esiza kufa ngalo alibekwanga kwangaphambili. Kunokuba sikholelwe oko, iBhayibhile ithi ukufa kubangelwa “lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.”—INtshumayeli 9:11.
Kanti iBhayibhile ayithi kukho ‘ixesha lokufa’?
Ewe iyatsho, kwiNtshumayeli 3:2 kubhalwe oku: “Kukho ixesha lokuzalwa nexesha lokufa; kukho ixesha lokutyala nexesha lokuncothula oko bekutyaliwe.” Eyona nto ithethwa yile vesi kukuba, kukho izinto ezihlala zikho okanye ezihlala zisenzeka ebomini. (INtshumayeli 3:1-8) UThixo akabekanga xesha esiza kufa ngalo. Okona kubalulekileyo kukuba asimele sizixakekise ngezinto ezingenamsebenzi kangangokuba simlibale uMdali wethu.—INtshumayeli 3:11; 12:1, 13.
Nakubeni ubomi esibuphilayo bunamahla-ndinyuka, sinako ukubandisa ukuba senza izigqibo zobulumko. IBhayibhile ithi: “Umthetho wesilumko ngumthombo wobomi, ukuze kususwe ubani kwimigibe yokufa.” (IMizekeliso 13:14) Ngendlela efanayo, uMoses waxelela amaSirayeli ukuba ‘yayinokolulwa imihla yawo’ ukuba ayenokuthobela uThixo. (Duteronomi 6:2) Kodwa ke, sinokuyicutha imihla yobomi bethu xa sisenza ngokungakhathali.—INtshumayeli 7:17.
Enoba silumke kangakanani na, asikwazi ukukubaleka ukufa. (Roma 5:12) Kungekudala le meko iza kutshintsha, ngoba iBhayibhile ithembisa ukuba ‘akusayi kubakho kufa.’—ISityhilelo 21:4.
Ithini IBhayibhile Ngenkululeko Yokuzikhethela? Ngaba Ubomi Bakho Bulawulwa NguThixo?